Arch Linux yakaburitsa Plasma vhezheni yePineTab | Linux Vakapindwa muropa
Arch Linux yakaburitsa Plasma vhezheni inokodzera iyo PineTab chaizvo
pablinux | | Zvimwe Linux, Noticias
Pandakaraira yangu PineTab zvishoma pamberi pegore rapfuura panguva ino, ini ndaive ndaona mamwe mavhidhiyo eUbuntu Kubata uye ndakafunga kuti zvingaite senge ndine mini yekubata PC. Ndakanga ndakanganisa sei. Ubuntu Touch inogona kumisikidza mamishinari eUI desktop kuburikidza neLibertine, asi gore rinotevera, izvo hazvigoneke paPINE64 piritsi. Zvakawandisa Arch Linux saMobian kubheja paPhosh, uye Manjaro akatarisa zvakanyanya paPinePhone.
Mune bvunzo dzangu, chandainyanya kufarira yaive Manjaro mune yayo vhezheni Plasma Mobile, asi yaigara yakatwasuka uye zvidzoreso zvopedzisa nekutyora mashandiro. Pamwe, iyo bhagi yaive nemhinduro yakapusa, asi nesarudzo dzakawanda kudaro munhu anoneta nekuyedza. Nhasi, ndichiona kana Manjaro yatanga mufananidzo mutsva, ndaona zvakare kuti yanga isina, asi ndatarisisa kuti ndione kana Arch Linux yainge yazviita uye ... ehe!
1 Arch Linux nePlasma yakakosha
1.1 Ndezvipi zvikanganiso zvandakawana panguva ino?
2 Arch Linux ARM inotaridzika zvakanaka, zvigunwe zvakayambuka
Arch Linux nePlasma yakakosha
En ichi chinyorwa gore rapfuura isu takatsanangura maitiro ekuisa anoshanda masisitimu pane PineTab. Zvichida kuti isu munguva pfupi tichazonyora chinyorwa nezve JumpDrive, izvo zvinotibvumidza isu kuti tivaisewo mune yemukati ndangariro, asi izvo zvatinofanira kutaura nhasi ndezvekuti Arch Linux ine Plasma "kunze kwebhokisi". Inowanikwa mu Iyi link, uye mugadziri wayo, Danct12, anodaro inogona kuva nembugs. Uye zvinoita.
Ndezvipi zvikanganiso zvandakawana panguva ino?
Kana ikasavandudzwa, kudzikisa chingave chinzvimbo chekutonga pamwe neswitch kana «toggles» inogona kunamatira ipapo. Izvi hazviitike mushure mekuvandudza iyo inoshanda sisitimu. NOTA- Iyo WiFi iri paPineTab haina kunaka kwazvo, saka zvinokurudzirwa kumisikidza hombe kuvandudza padhuze neiyo router.
Mumamiriro ekunze, iyo yekutsvaga bar uye yekudzora nzvimbo, kana yagadziriswa, inoendeswa kuruboshwe kana isu tiine iyo piritsi iri mumamiriro ezvinhu. Kuona izvo, semuenzaniso, kana iwe uine vhidhiyo yeYouTube inoridza, kutamba widget kunoonekwa kurudyi, izvi zvinogona kunge zviri izvo. ZVAKAITWA: Izvi ndizvozvo, sezvo bhawa rinogona kudhonzwa kuenda pakati.
Ruzha harushandi pakutanga. Zvirinani kwandiri, iwe unofanirwa:
Nyora mune chinouraya «alsamixer».
Dhinda F6 (keyboard inodikanwa).
Sarudza iyo «pinetab» kadhi rine mutsindo.
Chekupedzisira, simbisa rwiyo (neiyo «m» kiyi) izvo zvatinoda. Ini handisati ndawana maitiro ekumisikidza mahedhifoni, ini handizive kana iri bhagidhi.
Mufananidzo wakagadzirwa neGIMP paPineTab
Ini ndaisa Firefox, GIMP, LibreOffice, Kate, Ktorrent, Kodi, Okular, Audacity (yazvino vhezheni isina telemetry), RetroArch neSribus uye vanoshanda. Kunyangwe Visual Studio Code, asi kuisa kubva kuAUR kunotora nguva yakareba.
Iyo kamera, Megapixels, inoendawo; Tinogona kushandisa iyo selfie neiyo huru.
Screenshots inogona kutorwa kubva kunzvimbo yekudzora. Parizvino, dzimwe nguva nzvimbo yekutonga inobuda; inofanirwa kuvandudza.
Ruvara rwehusiku ruripo uye runoshanda.
Ivo vakatoturikira yakawanda yeiyo interface uye iri muchiSpanish.
Iyo accelerometer yekuenda kubva kunharaunda kuenda kune mufananidzo.
Kuita, tichifunga nezve kushomeka kwePineTab, kwakanaka. Angelfish haisi kukambaira sezvinoita mamwe mabhurawuza andakaedza.
Arch Linux ARM inotaridzika zvakanaka, zvigunwe zvakayambuka
Kunyangwe ndakave nedambudziko rekutenda munguva yakapfuura, ini ndaigara ndichitaura kuti izvi zvakavimbiswa, kuti mune ramangwana zvinhu zvingave zvirinani kana ivo vanogadzira vasina kusiya mapurojekiti avo. Panyaya yaDanct12, kwete chete haana kuisiya, asi mwedzi wapfuura akaburitsa mufananidzo naPlasma yeiyo mobile vhezheni yeArch Linux. Chinhu chakanyanya kundifadza rinenge gore rapfuura ndechekuona desktop maapplication piritsi. Zvino zvinhu zvave nani. Kuita kwacho kuri nani, uye isu tinogona zvakare kushandisa Plasma Mobile inoita kunge inoshanda.
Nguva inopfuura uye isu tinogona kupererwa. Tave takamirira angangoita makore gumi kuti tishandise "chaiyo" Linux pane nhare mbozha, zvakati wandei kubvira Canonical yazivisa kusangana kuti yakapedzisira yarega. Zvino, zvinoita kunge padhuze kupfuura nakare kose. Vari here PinePhone ine Manjaro KDEIko kune iyi Arch Linux, iyo hombe vhezheni inoshandisa Phosh asi isu zvakare tine imwe nePlasma, uye mumwedzi mishoma ivo vachaparura iyo JingPad A1 neJingOS mune ichave piritsi rakagadzirirwa kushandiswa kwemazuva ese. Tichaona kuti ramangwana rakamira sei, asi neArch Linux ine KDE software isina akawanda mabugs ini ndatofara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Arch Linux yakaburitsa Plasma vhezheni inokodzera iyo PineTab chaizvo
inoita 11 mwedzi
Zvisina basa: kutadza nhamba 5, zvakandisekesa sei!
Iyo tema yekumimura odhiyo mune alsamixer ndeye * yakasarudzika * iyo inofanirwa kunge yanga iriko kwemakumi emakore paGNU + Linux distros, uye ikozvino iri pahwendefa ine yayo inotevera-gen system! XD
Zvisinei, zvakapusa, nekuti hachisi bhagi chaicho, izvo chete nekutadza (uye ndinofunga ichisarudzo chine musoro) ruzha rwanyarara. Regedza uye voila.
Asi zvaive zvechokwadi zvinosetsa kune isu vedu vatove nekuziva imwe tsika kubva kune iyi yakareba uye yakawedzerwa tsika ...
Rarama kwenguva refu Mahara Software. Makorokoto!
Pindura kuna rv
Mhoro. "Ndinoziva" haisi bug. Muchokwadi, ini ndakatsvaga ruzivo nezvazvo nekuti, sekutaura kwako, izvo zvave sezvizvi mune aya masisitimu kubva pakutanga. Iyo yekuvandudza inoiunganidza se "bug" muforamu, uye mushandisi anoti haisi. Ini ndinofungidzira ndiyo "eye, ichi hachisi fekitori" mhando. MuManjaro zvinoita, asi zvigadziriso zvinorova; iwe unofanirwa kutarisa meseji dzese kuti uigadzirise uye ndine nungo xD
Neyekupedzisira, ndinobvumirana zvakasimba. Ndinovimba havazvirase.
JumpDrive, iyo diki software iyo inobvumidza iwe kuti ubatanidze nhare mbozha kuPc yekuisa anoshanda masisitimu mune yemukati ndangariro
Lakka 3.3 inosvika neRetroArch 1.9.7, kugadzirisa kwema cores, emulators uye nezvimwe